Nilaza ny CEO Twitter fa miasa amin'ny maody maizimaizina ho an'ny Android | Androidsis
Ny fampisehoana miaraka amin'ny teknolojia OLED dia misy amin'ny fitaovana mitombo isa. Ireo karazana efijery ireo dia tsy manome loko mazava sy mazava kokoa antsika fotsiny, fa mamela antsika ihany koa mitahiry bateria raha mampiasa fampiharana izay mahalala ny fomba hanararaotana ireo tombony omeny antsika isika.
Teknolojia OLED ihany mampiasa ny LED ilaina hanehoana loko hafa ankoatry ny maintyAmin'izany fomba izany, raha mampiasa rindrambaiko mainty tanteraka ny rindrambaiko iray, ny ankamaroan'ny LED eo amin'ny efijery dia tsy hanazava, fa ireo ilaina fotsiny hanehoana ny vaovao. Amin'izany fomba izany, batterie be dia be azo tehirizina.
Amin'izao fotoana izao, ny kinova Twitter ho an'ny Android dia manome antsika maody maizina, maody maizina izay manararaotra ny tombotsoan'ny teknolojia OLED, hatramin'ny fa tsy mampiasa mainty toy ny any aoriana, fa mampiasa loko mainty, manery ny LED an'ity karazana efijery ity mba hitodika amin'ny fomba tsy misy hafa amin'ny hoe tsy misy io lohahevitra io amin'ny fampiharana.
Tao anatin'izay volana vitsivitsy izay dia hitantsika ny fomba Google dia nanomboka nanavao ny ankamaroan'ny rindrambaiko tamin'ny fomba maizina ary toa manondro izany ny zava-drehetra ity fomba ity dia ho azo raisina amin'ny alàlan'ny fanombohana ny Android Q.
Manoloana ny fangatahana tsy mitsaha-mitombo avy amin'ireo mpampiasa Android ny tambajotra sosialy bilaogy bitika hampihatra ny maody maizimaizina indray mandeha, ho an'ny rehetra, hoy ny CEO CEO Jack Dorsey fa miasa eo io. Nampanantena foana i Jack ny famoahana ity kinova ity tato anatin'ny volana vitsivitsy, saingy amin'izao fotoana izao, tsy inona izany fa ny fampanantenna very eo amin'ny faravodilanitra. Andao hiandrasana raha ity, indray mandeha, dia tanteraka ny fampanantenana modely tena alina ho an'ny kinova Android.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Nilaza ny CEO Twitter fa miasa amin'ny maody maizimaizina ho an'ny Android izy